Ngura yatove inodiwa mukusimudzira Android | Linux Vakapindwa muropa
Google yakavhurwa munguva pfupi yapfuura iyo inclution programming mutauro Ngura pakati pemitauro inobvumidzwa Zvekuvandudza Android.
Sezvo Rust compiler yakaverengerwa muiyo Android sosi muti muna 2019, asi rutsigiro rwemutauro rwakaramba rwuchiedza. Zvimwe zvezvinhu zvekutanga zveRust zvekutumira kuApple zviitwa zvitsva zveBinder yekugadzirisa nzira yekutaurirana uye iyo Bluetooth stack.
Kuitwa kweRust yakaitwa sechikamu che chirongwa chekusimbisa chengetedzo, kusimudzira dzakachengeteka macoding matekiniki uye nekuvandudza kugona kwekuziva matambudziko kana uchishanda neyekuyeuka muApple. Izvo zvinoonekwa kuti kwakatenderedza 70% yeese njodzi dzine njodzi dzinoonekwa mu Android zvinokonzerwa nezvikanganiso kana uchishanda neyekuyeuka.
Iko kushandiswa kweiyo Rust mutauro, , que inotarisa pakachengeteka ndangariro manejimendi uye inopa otomatiki ndangariro manejimendi, inozodzora njodzi yekushomeka inokonzerwa nezvikanganiso panguva yekugadzirisa ndangariro, senge kuwana nzvimbo yekurangarira mushure mekusunungurwa uye kufashukira miganho yebhavhu.
Kuchengetedza ndangariro kubata kuno chengetedzwa muRust panguva yekubatanidza nekutarisa mareferenzi, kuteedzera kumisikidza kwechinhu uye hupenyu hwechinhu (chiyero), pamwe nekuongorora kurongeka kwekuwana ndangariro panguva yekumhanya.
ngura zvakare inopa nzira dzekudzivirira kubva kune mafashama manhamba, inoda kumanikidzwa kumisikidzwa kwemaitiro akasarudzika usati washandiswa, zvirinani kubata zvikanganiso muraibhurari yakajairwa, inotora pfungwa yezvinongedzo uye zvisingachinjiki misiyano nekutadza, uye inopa yakasimba static kunyora kudzikisira zvine musoro zvikanganiso.
Pa Android, yakachengeteka memory manejimendi inopihwa muKotlin neJava mitauro yatotsigirwa, asi haina kukodzera kugadzira system system nekuda kwekuremerwa pamusoro.
Ngura inobvumidza kuzadzikisa kuita padyo neC uye C ++ mitauro, Achibvumira iyo kuti ishandiswe kuvandudza yakaderera-chikamu zvikamu zveplatifomu uye zvikamu zvekusangana neiyo Hardware.
Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kweC uye C ++ kodhi, Android inoshandisa sandbox kusurukirwa, kuongororwa kwakasimba, uye bvunzo dzinotyisa. Sandbox yekuzvimiririra kugona kune mashoma uye asvika pamuganhu wezvaanogona (kuwedzera kupatsanuka mune maitiro hakuitike kubva kune yekushandisa sosi yekuona).
Pakati pekukanganisa kwekushandisa sandbox, ivo vanotaura kumusoro kwepamusoro uye kwakanyanya ndangariro kushandiswa kunokonzerwa nekudiwa kwekugadzira maitiro matsva, pamwe neyakawedzera latency inosanganisirwa nekushandiswa kweIPC.
Panguva imwecheteyo, bhokisi rejecha haribvise kushomeka mukodhi, asi rinongoderedza njodzi uye rinomomesa kurwisa, nekuti kubiridzira kunoda kuzivikanwa kwete imwe, asi hurema hwakati wandei.
Kodhi yekuyedza nzira ishoma nekuti, kuti uone zvikanganiso, unofanirwa kugadzira mamiriro ekuratidzwa kwedambudziko. Izvo hazvigoneke kuvhara zvese zvingangoita sarudzo, saka zvikanganiso zvakawanda zvinoenda zvisingaonekwe.
Yemaitiro maitiro pane Android, Google inoomerera kune 'mutemo wevaviri', maererano iyo chero yakawedzera kodhi haifanirwe kusangana zvinopfuura zviviri kubva mumatatu mamiriro- Shanda uine isina chokwadi data yekuisa, shandisa isinganetseke chirongwa chemutauro (C / C ++), uye unomhanya pasina rakaoma sandbox kusarudzika (nerombo rakakwidziridzwa).
Izvi zvinotevera kubva pamutemo uyu kuti kodhi yekugadzirisa dhata yekunze inofanirwa kudzikiswa kusvika padiki ropafadzo (yakasarudzika) kana kunyorwa mune yakachengeteka programming mutauro
Google haina chinangwa chekunyora zvakare kodhi C / C ++ iripo muRust, asi anoronga kushandisa mutauro uyu kugadzira kodhi nyowani.
Zvinoita zvine musoro kushandisa Rust yekodhi nyowani, nekuti zviverengero zvikanganiso zvakawanda zvinoonekwa mune nyowani kana ichangobva kuchinjwa kodhi. Kunyanya, kwakatenderedza makumi mashanu kubva muzana yemakanganiso ekurangarira akaonekwa mu Android anowanikwa mune kodhi yakanyorwa pasi pegore rapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ngura yatove inodiwa mukusimudzira Android
Irony, apo mukwikwidzi wako muhombe anopedzisira ave kutora chimwe chinhu chawakabatsira kugadzira kuzvinangwa zvako wega ... Ngura iri kuwedzera.
Chiratidzo chakatangazve basa pane server kodhi uye yayo yakadzamidzirwa cryptocurrency